Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Dabka ka dhacay Boosaaso & Dhismaha Suuqyada WQ:Cabdirashiid Colaad(Shabeel)
Dabka ka dhacay Boosaaso & Dhismaha Suuqyada WQ:Cabdirashiid Colaad(Shabeel)
December 6, 2011 - Written by shabeel - Edited byshabeel
Marka hore waxaan illaahay ka baryayaa in illaahay faraj khayr qaba u furo dadka ku tabaaloobay dabkaas ee shalayna buuxay ,maanta waxba haysan.
Taasu waa awoodaha illaahay ee aan cidina la wadaagin,waa cashar la siinayo inta wax haysata iyo inta aan haysanba.
Waa imtixaan adduun,qofkii isku saxa ee isku toosiya ayaana ku guulaysan kana badbaadi ciqaab intaa ka badan.
Waa arrin in lagu cibro qaato ay tahay,mana aha markii u horaysay ee arrintan oo kale ay Adduunka ka dhacdo,ee waa mid meelo badan oo kala duwan ka dhacday,wakhtiyo kala duwan,dhanka deegaanka tii raaso ka dhacday ayaa u dambaysay.
Dulucda Qormadaydani waa sidan soo socota
1. Ummadda Islaamka ah ee Walaalaha ah dadkaas Wixii ay ka caawin karaan ha ka caawiyeen.
2. DDSI oo aan ognahay in hadda ay ku hawlantahay Barnaamijka horumarinta iyo Dhismaha Magaalooyinka,waa in ay diyaariso jidad rasmi ah iyo nidaam lagu badbaadin karo ,lagagan hortagi karo misiibooyinka noocan ah.
2.1 Waa in Dawlad iyo Dadweyne,Qurbajoog iyo Degeljoogba loo hawlgalaa in la helo Gaadiidka Dabdamiska,lagana helaa magaalooyinka Waaweyn Dhammaantood.
2.3 Jidad si dhib yar looga geli karo loogana bixi karo waa in ay yeeshaan dhammaanba suuqyada Magaalooyinka DDS,waanna in qaabka is cidhiidhiga ah ee isku raranka ah laga fogaadaa dhammaan magaalooyinka iyo suuqyaduna noqdaan kuwo leh Marino haboon,oo naf iyo maalba lagu badbaadin karo.
2.4 In Gaadiidkaasu yahay qaali waa wax la wada og yahay, wixiise lagu dadaalo waa la helaa.
3. Ganacsatadu aad ha uga fikirto Badbaadada Suuqyada ganacsi in ay kaw ka tahay nidaamka iyo qaabka Suuqu u dhisanyahay.
Qormaddani waa dareen in badan igu jiray kana mid ahayd taxanihii aan waday,waxaase soo dedejisay dhacdadan naxdinta leh.
Markale ayaan leeyahay illaahay ha siiyo bedel khayr qaba walaalaha halkaa ku tabaaloobay,intii karta in ay gacan ka geysataana ha ka geysato alle dartii.